Archives momba ny tantaran'i Vietnam - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
Ny sokajy VIETNAM HISTORY dia misy lahatsoratra momba ny tantaran'ny vietnamiana nanomboka tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny nasionaly ka hatramin'ny fanjanahan-tany frantsay.
Noho ny fiorenana ara-tsosialy tamin'ny taonjato faha-15 dia afaka mivoatra ny kolontsaina sy ny kanto.
Tamin'ny fahatongavan'i Le, dia nanjary nanjakazaka ny Confucianism ary nanjary fotokevitra orthodox an'ny kilasy mpitondra tamin'ny taonjato faha-15.
Io no faminaniana momba ny tantaran'ny Vietnam, izay misy ny fanovana ara-dalàna sy faritany ary zava-misy politika any Vietnam ary ireo fanjakana teo alohany.
Ny nahaterahan'i Vietnam [Việt Nam] dia namaripaka tamin'ity boky ity dia ny fahaterahan'ny fahatsiarovan-tena vaovao ao amin'ny tontolon'ny kolontsaina aziatika Atsinanana izay nametraka azy tany ivelan'izao tontolo izao.
Ity lahatsoratra ity dia momba ny anaran'ny firenena Vietnam. Ho an'ny anaran'ny olona any Vietnam.
Comments Off amin'ny Alohan'ny hanombohana hiasa - Fizarana 2
Fitsidihana anio: 335
Andro farany 7 nitsidika: 2,310
Total visits: 420,561